OMG: भर्खरै आयो यस्ताे ड’र’ला’ग्दो खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला : – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /International/OMG: भर्खरै आयो यस्ताे ड’र’ला’ग्दो खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला :
OMG: भर्खरै आयो यस्ताे ड’र’ला’ग्दो खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला :
ब्राजिलमा कोरोनाबाट एक महिनामै ६६ हजारको मृ’त्यु’ब्रा’जि’ल’मा कोरोना भाइरस सं’क्र’मणका कारण पछिल्लो एक महिनामा ६६ हजारभन्दा बढीको मृ’त्यु भएको छ ।
ब्राजिलको सरकारी तथ्यांकअनुसार गत मार्च महिनामा मात्रै सं’क्र’म’णका कारण ६६ हजार पाच सय ७० जनाकाे मृ’त्यु भएको हो । यो संख्या फेब्रुअरीको भन्दा दोब्बर हो ।
लगातार बढिरहेको संक्रमणका कारण यहाँको स्वास्थ्य सेवा त’ह’स’न’हस भएको छ । तर संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा उचित कदम नचालेको भन्दै राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोको सरकारको तिव्र आ’लो’च’ना भइरहेको छ ।
यसै साता दुई मन्त्री र तीन वटै सैनिक सेवाका प्रमुखले राजीनामा दिएपछि उनीमाथि थप दबाब परेको छ ।कोरोना विस्तार रोक्न भन्दै स्थानीय सरकार र मेयरहरुले गरेको लकडाउनको बोल्सोनारोले बुधबार पनि टिप्पणी गरेका थिए ।
‘हामीसँग दुई श’त्रु थिए र छन्- भाइरस र बेरोजगारी । यो सत्य हो । र यो समस्या समाधान हामी घरमा बसेर गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनेका छन् । उनी लकडाउनको क’ट्ट’र आ’लो’च’क रहँदै आएका छन् ।
यो पनि : मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष
यो भनाई कलाकार रिया श्रेष्ठको हो । केही समय अगाडी उनले बोलेको यो कुरा अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । रिया श्रेष्ठ कुशल नृ’त्यं’ग’ना मोडल अनि कलाकार हुन्। उनले केही फिल्म र धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। नाच्नु उनको रुचिको विषय हो।”
बाहिर देखाउने माया रियालाई कृत्रिम जस्तै लाग्छ। रिया दर्शक श्रोताको माया र हौसलाले मक्ख छिन्। भन्छिन्, ‘काम नै मेरो लभर, दर्शक नै मेरो खुसी। आमा मेरो जिन्दगी ।
रियाले ज’न्जिर त्रा’स के म तिम्रो होइन र श्री ५ अम्बरे द रिटर्न हिरो लगायतका केही फिल्ममा अभिनय गरेकी छन्। तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसेकी छिन। केही फिल्म प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छन्। उनलाई कलाकारितामै निरन्तरता दिने रहर छ।”
निर्माता निर्देशकको आँखामा परिन् उनी। त्यहीँ एउटा फिल्ममा उनले एक सिनमा अभिनय गर्ने मौका पाइन्। निर्माता मौनता श्रेष्ठले बोस नामक फिल्म बनाउँदै थिए।”
अफगानिस्तानमा गोली हानी सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधीशको हत्या